मोटोपन, ग्यास्टिक तथा अल्सर रोगीका लागि उपयुक्त डल्ले खुर्सानी
नेपालीको भन्सामा खुर्सानी नभै खाना नै खल्लो हुन्छ । कसैलाई त खुर्सानी बिना खाना नै रुच्दैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हरीयो खुर्सानी खानु लाभदायिक हुन्छ तर रातो खुर्सानी(सुकेको) वा धुलो खुर्सानी भने हानीकारक हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रले नै प्रमाणित गरेको कुरा यो छ की अकबरे खुर्सानी भने मानिसका लागि अति अमृत […]
के तपाईलाई खुट्टाबाट आएको गन्धले हैरान त बनाएको छैन ?
गर्मी सुरु भएसंगै पसिनाबाट उत्पन्न हुने समस्या बढ्छ । यसको लागि कतिपयले विभिन्न बडी स्प्रे तथा पर्फ्युको प्रयोग गर्दछन् भने कतिले नियमित नुहाउनु, पानी पिउने अनि सन्तुलिन भोजनमा ध्यान दिने गर्दछन् । गर्मीमा देखा पर्ने अर्को एउटा समस्या हो जुत्ताबाट आउने गन्ध । अफिस होस् या घर जुत्ताबाट खुट्टा निकाल्दा वित्तिकै नराम्रो गन्ध आउँन थाल्छ […]
महिलाहरुले पढ्नै पर्ने कुरा, कस्तो झुठ बोल्छन् पुरुष विवाहअघि युवतीसगँ ?
कुनै पनि युवतीलाई आफ्नो प्रेममा पार्नका लागि वा विवाहको लागि राजी गर्न युवाहरुले झुठको साहरा लिने गरेका छन् । युवतीलाई इम्प्रेशन पार्नका लागि युवाहरुका यस्ता झुठलाई थाहा पाउन वा पत्ता लगाउन सहज भने हुँदैन । हुन त विवाह भन्दा अगाडि वा कसैलाई पनि आफूसँग नजिक ल्याउन युवतीहरुले पनि धेरै कुरामा झुठको साहरा लिने गरेका हुन्छन् […]
यदि तपाई सुन्दर आँखीभौं बनाउन चाहनुहुन्छ भने यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस्
सुन्दरताको लागि अनुहारमा रौँ नहुनु राम्रो मानिन्छ । तर आँखा माथी हुने रौँ अर्थात आँखीभौं भने सुन्दरतामा निखार ल्याउने भाग हो । त्यसैलाई आँखीभौंलाई सुन्दर बनाउनको लागि आफूले चाहे अनुसारको आकार बनाउन युवायुवती पार्लर समेत धाउने गर्छन् । केही महिलामा भने अनुहारको अरु भाग चिल्लो हुन्छ र आँखीभौं पनि निकै पातलो हुन्छ । जसले गर्दा […]
दाह्री पाल्दा लाग्दैनन् यस्ता प्राणघातक रोग
दाह्री पाल्दा लाग्दैनन् यस्ता प्राणघातक रोग ! अचेल युवापुस्तामा दाह्री पाल्ने फेसन नै चलेको छ । स्कूल कलेज पढ्ने टिनएजर हुन् वा अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी नै किन नहुन्, धेरैजसो पुरुषहरुले अचेल दाह्री पालेकै देखिन्छ । कतिपयले शौखका लागि पनि दाह्री पाल्ने गरेको पाइन्छ । दाह्री पाल्नुका छुट्टै फाइदा पनि छन् जो उनीहरु स्वयंलाई थाहा […]